ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံရေး သမားများ... | နေမင်းဇွဲမာန်
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံရေး သမားများ...
10. H. Vasanthakumar
အိန္ဒိယနိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံရေးလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သူပါ ။ အိမ်ဆောက်လုပ်ရေး တန်ဆာပလာ ပစ္စည်းများ ရောင်းချတဲ့ Vasath & Co (company) ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ Tamil Nadu မှတည်ရှိပါတယ် ။ ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ $2 billion ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံရေးသမားတွေထဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ် ။
၂၀၀၆ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ သမ္မတ George Bush ကို ဝေဖန်အပြစ်တင် ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ပါတီ တော်တော်များများရဲ့ ထောက်ပံ့ပေးသူနဲ့ ထိန်းချုပ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ၂၀၁၂ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပိုင်ဆိုင်မှု အနေနဲ့ $2.7 billion ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တော်တော်များများက အမွေဆက်ခံ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူကတော့ Lebanon နိုင်ငံရေးသမား ဘီလီယံနာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေပါတယ် ။ ပိုင်ဆိုင်မှု အနေနဲ့ $2.8 billion ရှိပြီး သူရဲ့ နိုင်ငံရေး ရာထူး နဲ့ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနေ ရရှိခဲ့တာပါ ။
7. Cayetana Fitz – James Stuart
သူမကတော့ စပိန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့စားဘွဲ့ ရရှိထားပြီး သူမရဲ့ အဘွားက မင်းသမီး Victoria Eugenia ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ $4.9 billion ရှိပြီး တော်ဝင်မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့ အတွက် အမွေဆက်ခံ ရရှိခဲ့တာပါ ။
6. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
သူကိုတော့ Sheikh Khalifa လို့လည်း သိနိုင်ပြီး United Arab Emirates ရဲ့ သမ္မတလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ သူရဲ့ ဖခင်နေရာကို ဆက်ခံလာခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ $15 billion ဖြစ်ပါတယ် ။ သူရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက ရေနံလုပ်ငန်းတွေ ၊ အမွေတွေကနေ ရရှိခဲ့တာပါ ။
5. King Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud
သူကတော့ သူရဲ့ ညီအကိုဝမ်းကွဲ ကို ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး Saudi Arabia ရဲ့ ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ global recession မှာ ရေနံ ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင် ခဲ့ပြီး ဒီအစီအစဉ်ကနေ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တဲ့ အတွက် လူသိများခဲ့ပါတယ် ။ ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှု အနေနဲ့ကတော့ $18 billion ရှိပြီး တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ် ။
သူကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးလောက မှာ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အနေနဲ့ $19.5 billion ရှိပါတယ် ။ အမေရိကန် အချမ်းသာဆုံး စာရင်းထဲမှာ အဆင့် ၁၂ ရှိပြီး နယူးယောက် မြို့တော်ဝန် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး Bloomberg L.P (company) ရဲ့ ပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
နံပါတ် ၃ နေရာမှာ ရပ်တည်နေတာကတော့ Sultan of Brunei ရဲ့ ၂၉ ဆက်မြောက် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် ။ နိုင်ငံကို ၄၄ နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ စက်ရုံ လုပ်ငန်း နဲ့ ရေနံ လုပ်ငန်းတွေကနေ ရရှိခဲ့တာပါ ။ ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ $10 billion ရှိပါတယ် ။
ပိုင်ဆိုင်မှု $20 billion နဲ့ အတူ ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေတာကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူကို ကမ္ဘာ အချမ်းသာဆုံး ဘုရင် အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ၆၇ နှစ်ကြာ နန်းစံခဲ့ပါတယ် ။ စတင် ဖြစ်လာခဲ့တာကတော့ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇွန် ၉ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗလာဒီမာပူတင်ကတော့ နံပါတ် တစ် နေရာမှာ ရပ်တည် နေပါတယ် ။ ပိုင်ဆိုင်မှု အနေနဲ့ $40 billion ရှိပြီး အမျိုးမျိုးသော ရင်းနှီး မြှပ်နှံမှုတွေနဲ့ သူရဲ့ နိုင်ငံရေး ရာထူးတွေနေ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
credit : http://www.tiptoptens.com/